Precision Shaft Zvikamu - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
Zvikamu ndizvo zvinhu zvakakosha zvinogadzira muchina, uye zvikamu zvisingapatsanurwe zvega zvinogadzira muchina nemuchina.
Zvikamu hazvingori chirango chekutsvagisa uye dhizaini yemakina ekutanga zvikamu mumidziyo yakasiyana-siyana, asiwo izwi rakajairwa rezvikamu uye zvikamu.
Tsvagiridzo uye dhizaini yemamechani ekutanga zvikamu mumidziyo yakasiyana-siyana zvakare inguva yakazara yezvikamu uye zvikamu. Izvo chaizvo zvemukati zvezvikamu sechirango zvinosanganisira:
1. Kubatana kwezvikamu (zvikamu). Zvakadai senge threaded connection, wedge connection, pini yekubatanidza, key connection, spline connection, interference fit connection, elastic ring connection, riveting, welding uye gluing, nezvimwe.
2. Belt drive, friction wheel drive, key drive, harmonic drive, giya drive, tambo drive, screw drive uye mamwe madhiraivha emagetsi anotamisa mafambiro nesimba, pamwe neanoenderana shafting zero senge drive shafts, couplings, clutches nemabhureki. (chikamu.
3. Zvikamu zvinotsigira (zvikamu), zvakadai semabheya, makabati uye mabhesi.
4. Lubrication system uye chisimbiso etc. ne lubrication basa.
5. Zvimwe zvikamu (zvikamu) sezvitubu. Sechirango, zvikamu zvinotanga kubva kune yakazara dhizaini dhizaini uye shandisa zvizere mhedzisiro yeakasiyana siyana ane hukama kudzidza misimboti, zvimiro, hunhu, mashandisirwo, kukundikana modhi, kutakura mutoro uye magadzirirwo ezvikamu zvakasiyana siyana; dzidza dzidziso yekugadzira zvikamu zvekutanga , Nzira uye nhungamiro, uye nokudaro yakagadzira hurongwa hwedzidziso hwechidzidzo hwakasanganiswa nehuchokwadi, hwave hwaro hwakakosha hwekutsvaga nekugadzira michina.
Kubva pakabuda michina, kwave nezvikamu zvinowirirana zvemakina. Asi sechirango, zvikamu zvemakanika zvakapatsanurwa kubva kumakanika chimiro uye makanika. Nekuvandudzwa kweindasitiri yemuchina, kubuda kwedzidziso itsva dzekugadzira uye nzira, zvinhu zvitsva, uye maitiro matsva, zvikamu zvemakanika zvapinda muchikamu chitsva chebudiriro. Mafungiro akadai seanogumira chinhu nzira, fracture mechanics, elastohydrodynamic lubrication, optimization dhizaini, kuvimbika dhizaini, komputa-inobatsira dhizaini (CAD), yakasimba modhi (Pro, Ug, Solidworks, nezvimwewo), kuongorora system uye dhizaini maitiro ane zvishoma nezvishoma uye dhizaini yezvikamu zvemakanika. Kuzadzikiswa kwekubatanidzwa kwezvirango zvakawanda, kubatanidzwa kwe macro uye micro, kuongororwa kwemisimboti mitsva uye zvimiro, kushandiswa kwesimba rekugadzira uye dhizaini, kushandiswa kwemakomputa emagetsi, uye kuenderera mberi kwekuvandudzwa kwedzidziso dzekugadzira uye nzira maitiro akakosha. mukuvandudzwa kwechirango ichi.
Kushata kwepamusoro chinhu chakakosha chehunyanzvi chiratidzo chinoratidza microscopic geometric chimiro chikanganiso chepamusoro pechikamu. Ndiyo nheyo huru yekuedza hutano hwepamusoro hwechikamu; ingave yakasarudzwa zvine musoro kana kwete yakanangana nemhando, hupenyu hwebasa uye mutengo wekugadzira wechigadzirwa. Pane nzira nhatu dzekusarudza kushata kwepamusoro kwemekiniki zvikamu, zvinoti, nzira yekuverenga, nzira yekuyedza uye nzira yekufananidza. Mukugadzirwa kwezvikamu zvemagetsi, kuenzanisa kunowanzoshandiswa, iyo iri nyore, inokurumidza uye inobudirira. Kushandiswa kweanofananidzira kunoda akakwana mareferensi ezvinyorwa, uye akasiyana siyana aripo emuchina dhizaini zvinyorwa zvinopa zvakawanda zvakadzama zvinhu uye zvinyorwa. Inowanzo shandiswa ndeye kushata kwepamusoro kunopindirana nedanho rekushivirira. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, iyo idiki iyo dimensional kushivirira zvinodiwa zvemichina zvikamu, idiki iyo yepamusoro roughness kukosha kwemakanika zvikamu, asi hapana yakagadziriswa inoshanda hukama pakati pavo.
Semuenzaniso, zvibato zvemimwe michina, zviridzwa, mavhiri emaoko, midziyo yehutsanana, uye muchina wekudya inzvimbo dzakagadziridzwa dzemamwe mapatani emagetsi. Nzvimbo dzadzo dzinodiwa kuti dzigadziriswe zvakanaka, kureva kuti, kushata kwepamusoro kwakakwira zvakanyanya, asi kushivirira kwavo kwedimensional kunoda zvakanyanya. low. Kazhinji, pane kumwe kunyorerwa pakati peyero yekushivirira uye kushata kwepamusoro kukosha kwezvikamu zvine dimensional kushivirira zvinodiwa.